Minyengetero Yekukunda Mumatare Edzimhosva | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Munyengetero Minamato Yekukunda Mumatare edzimhosva
Minamato Yekukunda Mumatare edzimhosva
VaRoma 8:33: Ndiani uchapa mhosva vasanangurwa vaMwari? NdiMwari unoruramisa;
Mwari vanoshuvira kukunda kwatiri nguva dzese uye mumamiriro ese ezvinhu, zvose munyama nepamweya. Kunyangwe tisati tapinda muhondo ipi neipi nevadzivisi vedu, Mwari akatogadzirira kurwa kwedu. Anodaro mubhuku raIsaya 45, kuti Achatitungamira uye nekururamisa nzira, saka isu tisati tasvika pane dzimwe nzira, Mwari vakatotungamira pamberi pedu kuti vatipe kukunda. Nhasi tichave tichiita minamato yekukunda mumatare edzimhosva. Sezvo isu tichinamata iyi minamato mukutenda nhasi, Mwari wekudenga vacharwa isu hondo munaJesu Kristu zita.
Zvakakosha hazvo kuti kana uchitsvaga Mwari kuti vakunde mumatare edzimhosva iwe hausi kudivi rekusarongeka uye kusaenzana nekuti Mwari vangasakudze minyengetero yakadaro. Akataura mubhuku raZvirevo 11, kuti chiyero chenhema chinonyangadza kuna Ishe asi kurema kwakakwana kunomufadza. Mune mamwe mazwi, Mwari pachavo vanorovera rusaruro uye rusaruro, kunyangwe rugwaro rwunotiudza kuti Mwari wedu ndiMwari akarurama. Kana izvi zvagadziriswa uye isu tine chokwadi chekuti hatisi kudivi rezvakakodzera rehutongi, saka tinogona kuenda kunoenderera mberi nekumhan'ara nyaya yedu mumatare edenga uye kutsvaga tsitsi dzaMwari, kuitira kuti zvive nyore kuti tiwane kukunda kwedu pano pasi.
Zvakakosha kwatiri kuti tinzwisise kuti hupenyu kutanga kune hwese mweya husati hwave hwepanyama uye nekudaro kusvika pairi kubva pakuonekwa kwepanyama kungave kusiri chaiko kuchenjera. Jesu Kirisito paakadzidzisa vadzidzi vake kunyengetera, akavadzidzisa kukumbira kuti kuda kwaMwari kuitwe pasi, sezvakunoitwa kudenga. Izvi zvinoreva kuti kana tikasatanga kugadzirisa nyaya yedu kuna Mwari kudenga tobva tichifamba Naye kuti tivone kuti kukunda kwedu kwasimbiswa, saka hatifanire kushamisika kana pakapera nyaya yedare tikarasikirwa nemhosva pano pasi.
Ndine nhau dzakanaka kwauri nhasi, nekuti wauya kuzotsvaga chiso chaIshe pamusoro penyaya iyi, haungazvirase muzita raJesu Kristu. Ini handina basa kuti nyaya irikupesana newe here kana kuti kwete, handina basa kuti unomira here kana kuti kwete, asi sezvaunodana kuna She wekudenga nhasi, Iye achakuponesa. Mhosva ichaenda munzira yako muzita raJesu Kristu.
Zvino nditeerere, kunyangwe kana uine mhosva kana iwe wakanganisa, tsitsi dzaMwari dzichakupindurira. Rangarira nyaya yemukadzi akabatwa muchifeve, iye muna Johane 8: 3-11, iye akafanirwa kufa zvinoenderana nemutemo, akatengwa paakaunzwa kuna Jesu Kristu, mutongi wevose, tsitsi dzaMwari dzakaponeswa. iye. Izvi zvinoreva here kuti Mwari anotendera upombwe? Ngazvisadaro, Mwari haambofi akabvumira zvivi, asi chokwadi chinoramba chiripo, kuti chiitiko chose chinotadzira Mwari uye kwete munhu, kana Mwari vakukanganwira, hapana murume anogona kukupomera mhosva uye abudirire. Ndokusaka ndati kwauri nhasi, sezvaunoita minamato iyi yekukunda mumatare edzimhosva, uchave nekukunda muzita raJesu Kristu.
Chimwe chezvinhu chatinofanira kutsvaga kana tichireverera nyaya yedu pamberi paMwari inyasha dzake. Bhaibheri rinoti muna VaHeberu kuti isu tinofanira kuuya takashinga kuchigaro chenyasha kuti tigowana tsitsi saka chekutanga chatinofanira kuita kana tichikumbira rukundo mumatare edzimhosva kutsvaga tsitsi dzake nekuti tinongogona kuwana kururamisira kwake mamiriro edu kana tichinge taruramiswa netsitsi dzake.
Zvisinei hazvo, Mwari vanotendera kutipa kururamisirwa kwese kwese kudzvinyirira kwatinoenda mumaoko avanhu. Bhuku raMapisarema 10: 6 rinoti Ishe vanoita kururamisa nekutonga kune vese vakadzvinyirirwa. Zvakare, muna Isaya 54:17, Mwari akativimbisa kuti hapana chombo chakagadzirirwa kutirwisa chinobudirira uye rurimi rwose ruchasimukira kutitonga mukutonga Achatonga. Saka hatifanirwe kutya nekuti kunyangwe zvinhu zvatakaita, isu takaita nekusaziva, Mwari vanokwanisa kubata moyo yevose vanobatanidzwa kusanganisira nevatongi nekuda kwedu. ZVIREVO 21: 1 inotiudza kuti moyo wamambo uri mumaoko aIshe uye senzizi dzemvura, anozvishandura chero kwaanoda.
Izvi zvinoreva kuti kunyangwe isu tine mhosva asi isu takaperera uye takapfidza pane zvatakaita, Mwari vanokwanisa kukurudzira zvisarudzo zvedare, zvekuti zvichazozvifambira isu pachedu.
Mwari wedu ndiMwari pazvinhu zvese. Mapisarema 24 anotiudza kuti pasi ndeaIshe nekuzara kwawo, nyika nevanhu vese vanogara mairi kusanganisira mhandu nevatongi vedu. Mapisarema 62:11 inotiudzawo kuti simba rese nderaMwari, nemamwe mazwi, kana Mwari ari kwatiri isu hapana simba kunyangwe kudenga kana pasi kunogona kutirwisa. Uye kusvika parizvino tinoziva kuti Mwari haangamboenda muhondo uye kuti vakunde vakundwa. Nekudaro, zvakakosha kuti isu tisanetseka, asi kuti isu tikande matambudziko edu paari nekuti Iye anokwanisa kutarisira zvese. VaFiripi 4: 6 kuti tirege kuzvidya moyo pasina, asi muzvinhu zvese nemunamato uye nekuteterera, tinofanira kuita kuti chikumbiro chedu chizivikanwe kuna Mwari, ngatinamatei minamato inotevera.
• Baba Vekudenga ndinoda kukutenda nekuti izwi rako nderechokwadi uye haumbonyepi, wakataura mushoko rako kuti chiyero chenhema chinonyangadza kwauri. Naizvozvo ndinokumbira kuti mundireverere pese pese zvisakanaka uye kusarongeka kuri kushandiswa kwandiri nevadzivisi vangu mumatare uye mundipe rukundo muzita raJesu.
• Ishe, makapikira, kuti hakuna nhumbi inorwiwa kuzorwa neni, inobudirira, uye rurimi rwoga rwoga runondimukira mukutongwa, ruchapiwa mhosva. Naizvozvo ndinokumbira kuti mupe mhosva rurimi rwese rwunomukira kwandiri pakutonga ikozvino. Nekuti izwi rako rinoti hakuna munhu unogona kupomera vakasanangurwa, nekuti ndiwe unoruramisa. Ishe ruramisirai uye mundisunungure muzita raJesu.
• Ah ishe, sekunyengetera kwakaita David ndinonamata zvakare kuti nekuti ndinovimba nemi, ngandirege kunyadziswa kana vavengi vangu ngavandikunde muzita raJesu.
• Baba makati ini ndinofanira kuuya ndakashinga pamberi pechigaro cheushe chenyasha kuti ndiwane tsitsi uye ndiwane nyasha dzekubatsira panguva yezvinodiwa. Ishe ndinouya pamberi pechigaro chenyu nguva ino uye ndinokumbira tsitsi mune zino mamiriro. Ishe ndinopfidza pane zvese zvandingave ndaita kupa mupiro iyi uye ndinokumbira kuti neropa raJesu munyore zvakaipa zvangu uye mundisunungure muzita raJesu.
• Ishe makati moyo wamambo uri mumaoko ako uye une simba rekuutendeudza munzira yaunoda. Saka ini ndinoisa munhu wese anopinda nyaya iyi mumaoko ako uye ndinonamata kuti mutendeuke moyo yavo kuti vandifarire muzita raJesu.
. Zita rako inhare yakasimba uye ndoziva kuti kana ndikamhanyira mariri ndichave akachengeteka, ishe chengetedza kubva mumaoko evavengi vangu uye ndipe rukundo muzita raJesu.
Previous nyayaMinamato Yekununurwa Kubva Kunesimba
inoteveraKunamata Kuchenesa Minamato
30 Matipi Emunamato Kuti udzorere Ose
Anonamata Anonongedza Anonongedza Kuti Uzvisunungure Iwe Poga Kubva muhusungwa hweChikwereti